? သာသာယာယာလေး ဖယ်ရှားလိုက်ပါ ? မိတ်ကပ်တွေလိမ်းပြီး ဖျက်ရတဲ့အခါ အတင်းဖိပွတ်ဆွဲနေရလို့ အရေးအကြောင်းဖြစ်မှာ စိတ်ပူနေလား ❓ ? Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue တစ်ရွက်က အသာအယာ ပွတ်သပ်ပေးရုံနဲ့ ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံ မိတ်ကပ်တွေ အားလုံးကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှား သန့်စင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရေပြားအရေအကြောင်းဖြစ်လာမှာနဲ့ အသားအရေ ထိခိုက်လာမှာကို လုံးဝ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ? အသားအရေအားလုံးအတွက်သင့်တော်ပြီး Sensitive Skin များပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
? နူးညံ့တဲ့ အမြှုပ်လေးတွေရဲ့ ထိရောက်တဲ့ သန့်စင်မှု ? ? Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue ကို အသားအရေ ထိခိုက်မှု လုံးဝ မရှိစေမယ့် Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Tissue မှာ ပါဝင်တဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမြှုပ်လေးများက ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံ မိတ်ကပ်တွေကိုပါ လွယ်ကူစွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
အသားအရေကို လုံးဝ ထိခိုက်မှု မရှိစေတဲ့ Remover ??? ? Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue ? က မျက်နှာအသားအရေကို ထိခိုက်မှု လုံးဝမရှိစေမယ့် Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အသုံးပြုရာမှာ မျက်နှာအရေပြားကို ဖိပြီး ပွတ်ဆွဲစရာမလိုပဲ အသာအယာ ပွတ်သပ်ပေးရုံနဲ့ ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံမိတ်ကပ်တွေကိုပါ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
Surgical Mask ကြောင့် ဝက်ခြံနှင့် အဆီဖုတွေ ထွက်လို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား❓ မျက်နှာအသားအရေ ပြဿနာတွေ ကင်းရှင်းဖို့ဆို အခြေခံကျတဲ့ Cleansing ကို သေချာလေး ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အခုချိန်ခါမှာ ကျန်းမာရေးကြောင့် Mask အမြဲဝတ်နေရတာဆိုတော့ ချွေးကြောင့် ဝက်ခြံနှင့် အဆီဖုတွေ အလွယ်တကူဖြစ်တတ်ပါတယ်။ New Skiin Foam Cleanser နဲ့ မျက်နှာမသစ်ခင် ? Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue ? နဲ့ အရင်ဆုံး အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးပါနော် အသားအရေ ထိခိုက်မှု လုံးဝ မရှိစေတဲ့ Fomula နဲ့ Ketchup Remover ကို ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ?Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
နှုတ်ခမ်းနီ Crazy လေးတွေ ရှိလား ? နှုတ်ခမ်းနီကို ဆိုးလိုက်ဖျက်လိုက်နဲ့ လုပ်တတ်တဲ့ သဲလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် Ketchup Matte Liquid Lipstick နဲ့ Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue ရှိတယ်နော် ? ? Ketchup Lipstick မှာ 01 Chocolate, 02 Pasta, 03 Ketchup, 04 BBQ, 05 Burger မတူညီတဲ့ အရောင် (၅) မျိုးစလုံးက အရောင်ထွက် မှန်ကန်တိကျပြီး တစ်နေကုန်ခံတဲ့ Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ? Peppermint ပါဝင်ပြီး ပူရှိန်းက သင့်နှုတ်ခမ်းသားကို ပိုမိုကျန်းမာစေပါတယ်။ ? Ketchup Lipstick လေးတွေ စိတ်တိုင်းကျ ဆိုးပြီးရင်တော့ Ketchup Remover လေးနဲ့ သေချာလေးဖျက်ပေးနော် ? Ketchup Remover က အသားအရေကို ထိခိုက်မှု လုံးဝမရှိစေတဲ့ Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Tissue မှာပါဝင်တဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမြှုပ်လေးတွေက ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံ မိတ်ကပ်တွေကိုပါ လွယ်ကူစွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖိပြီး ပွတ်ဆွဲစရာမလိုဘဲ အသာအယာ ပွတ်သပ်ပေးရုံနဲ့ သန့်စင်စေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ် Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
ရေစိုခံမိတ်ကပ်တွေကို ❤️ Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue ❤️ ဖြင့် အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားလိုက်ပါ Ketchup Remover Tissue မှာ ပါဝင်တဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမြှုပ်လေးများက ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံ မိတ်ကပ်တွေကိုပါ အလွယ်တကူ သန့်စင်စေပါတယ်။ ဖိပြီး ပွတ်ဆွဲစရာမလိုဘဲ အသာအယာ ပွတ်သပ်ပေးရုံနဲ့ မိတ်ကပ်များ အားလုံး သန့်စင်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရေပြားအရေးအကြောင်း နှင့် အသားအရေ ထိခိုက်မှာကို လုံးဝ(လုံးဝ) စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်